Deni oo kala diray Golihii degaanka Qardho maamulna u Magacaabay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Deni oo kala diray Golihii degaanka Qardho maamulna u Magacaabay
Deni oo kala diray Golihii degaanka Qardho maamulna u Magacaabay
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa soo saaray Xeer Madaxweyne Lr. 26 ee 12ka September 2021, kuna saabsan kala dirid Golaha Deegaanka Degmada Qardho iyo Magacaabid Guddoomiye iyo Guddoomiye Ku-xigeen Degmada Qardho.
Markuu arkay: Dastuurka Maamulka Puntland Qodobkiisa 80aad.
Markuu garawsaday: In ay dhamaatay muddo xileedka Golaha Deegaanka Degmada Qardho
Markuu tixgeliyey: Aqoontooda, kartididooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo
1. Waxaa la kala direy Golaha Deegaanka Degmada Qardho
2. Waxaa Maxamed Faarax Abdiseed (Buraale) si ku meel gaar ah loogu magacaabay Guddoomiyaha Degmada Qardho.
3. Waxaa Maxamuud Maxamed Ciise si ku meel gaar ah loogu magacaabay Guddoomiye ku-xigeenka Degmada Qardho.
Previous articleSJS jointly trains 25 journalists from Galmudug and Puntland in Galkayo
Next articleRooble” Mawqifkaygu mabda’iyan waxa uu yahay in kiiska Ikraan uu helo baaritaan lagu kalsoon yahay “